တာရာမင်းဝေ | ဥက္ကာကိုကို
ငါ ပျော်တယ် ငါ့ဘာသာလည်း ပျော်တယ်
အေးလေ မင်းလည်း တစ်ယောက်တည်းပါပဲ
ကလူ ….. ကလူ လို့
ကျန်တဲ့သူတွေကို ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး မဟုတ်လား
းဆရာ ၊ ကဗျာဆရာ တာရာမင်းဝေ
ကြယ်တစ်ရာ ခြံရံပြီး ကြွေကျသွားခဲ့တယ်။
မဟာလင်္ကာ တစ်ပိုင်းတစ်စ ရှိနေလေရဲ့။
(လက်နက်မပါဘဲ စစ်ဝင်္ကပါမှာ ငါ….မတိုက်ရဲဘူး)
ခါးကုန်းနေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မြရာပင်အိုကြီးဟာ
‘ထောင်း’ ခနဲ မီးပွင့်ပြတ်တောက်သွားပြီး
‘….’ ကို ချစ်တယ်..လို့
သရဲခြောက်ရာ ညတစ်ညကို ပိုသတိရတတ်တယ်…။
ငါ့ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူမှာ …
အကြွင်းမဲ့ ဖော်ပြသွားခြင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါ … သတ္တိကောင်းကင်မှာ….နီလွင်ထစ်ချုန်း
ငါကလည်း ‘ အဓိပတိဘွား ‘ ဖြစ်ချက်ခဲ့တာကိုး….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ‘ လူမိုက် ‘ လို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်…
ဗီးနပ်စ်ရဲ့ နက္ခတ်တို့ တလက်လက်ပြာဝေမှုန်သင်း
ဆွေးလျညှိုးခွေ ဖြေမပြေသူလေး အတ္ထုပ္ပတ္ထိ
မြင်းကကြိုးတို့ကိုပြင်လို့ ‘ သ ‘ လို့နေခဲ့ပေါ့။
‘ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က သုညနဲ့စာရင်
ဗလာစာအုပ်ပေါ်က သုညကမြတ်တယ် ‘ တဲ့
‘ မင်းကကော ဘာလဲ ‘ လို့
အနန္တတွေ က ၀ိုင်းမေးတော့
သန်လျက်အတွက် ပန်းခူးပေးခွင့် မပါလို့…..
ရွာဇနပုဒ်နဲ့မိုးရေထဲ
ငါ့ရဲ့ ကံ့ကော်ရွက် ဖဲချပ်ကလေးတွေ
‘ မထိုက်တန်သူဆိုတာ လွင့်မျောရမှာပါဘဲ ‘
တစ်ခြမ်းပဲ့ ‘ လ ‘ ပဲ ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဖန်ဆင်းပစ်မယ် ……….ကွယ်။
အဝေးကနေ ရှိုက်မွှေး လွမ်းဆွတ်ပါရစေဦးနော်..။
တစ်ခြမ်းပဲ့ ‘ လ ‘ က
အလံမလဲမီ ‘ ည ‘ ဖြစ်တယ်။
ရိုးသားစွာ ..တို့ ဝေးလိုက်ကြပါစို့။
ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင် ထာဝစဉ် ချမ်းမြေ့စေသား..
ငါချစ်မြတ်ရတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေနဲ့ မိန်းမပျိုကို
‘ ဘ၀ ‘ ဆိုတဲ့ မာယာနိုင်ငံအိုက…
‘ ဓါတ်ပုံလေး ‘
‘ အတိတ် ‘
မိုးစက်တွေထဲ သက်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်ခဲ့ဖူးပါရဲ့ ……..။ ။
‘ ကျွန်တော်နဲ့တိမ်ညိုနိမိတ် ‘
တာရာမင်းဝေရဲ့ အမည်ရင်း ကတော့ ချစ်ညီညီ ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၆၇ စက်တင်ဘာ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန် တောင်ဥက္ကလာတွင် သတင်းထောက် ဦးကျော်ရှိန်နှင့် ဒေါ်လှကြည် တို့က မွေးဖွား ခဲ့တယ်။ မွေးချင်း ၃ ဦးအနက် ဒုတိယမြောက် သားဖြစ်တယ်။
သူငယ်တန်း ကနေ စတုတ္ထတန်း အထိ တောင်ဥက္ကလာ အမက (၁ဝ) တွင် လည်းကောင်း၊ ပဉ္စမတန်း ကနေ ဒဿမတန်း အထိ ရန်ကင်း အထက (၂) မှာ လည်းကောင်း ပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၆ မှာ အခြေခံ အထက်တန်းကို မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (လှိုင်) ကို အင်္ဂလိပ်စာ အဓိကနဲ့ တက်ရောက် သင်ကြားပြီး ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ မြောက်ဒဂုံ (၄၅) ရပ်ကွက်၊ ပီမိုးနင်း (၁) လမ်းမှာ နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဘုန်းလူ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဗကသ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ဝေတဲ့ စာစောင်တွေမှာ ကဗျာတွေ စတင် ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင် ခဲ့သလို၊ ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်မှာ တက်ွ့ကစွာ ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ၁၉၈၉ ဗကသ ပြန်ဖွဲ့ချိန်မှာ ဗကသ ခေါင်းဆောင် တယောက် အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့ပြီး၊ ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီးနဲ့ ကိုအောင်ဒင်တို့ အဖမ်း ခံရချိန်မှာ ဗကသ ခေါင်းဆောင်မှုကို တာဝန် အပြည့် ယူပြီး ဒေါင်းအလံကို ဆက်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉ဝ မှာ အဖမ်း ခံရပြီး၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အထိ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်တာကို ခံခဲ့ရတယ်။ အင်းစိန်၊ သာယာဝတီနဲ့ သရက် ထောင်တွေမှာ ချုပ်နှောင် ခဲ့ရပြီး၊ ထောင်က လွတ်လာ ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ စာပေလောက ထဲကို ခြေစုံပစ် ဝင်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ကဗျာတွေ ကတော့ အကျဉ်းထောင်တွေ အတွင်းမှာ ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ “ကျောင်းဖွင့်ချိန်”၊ “ဥဒါန်း” နဲ့ “ကျောင်းသား အတ္ထုပ္ပတ္တိ” တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
၁၉၉၄ ခု မေလထုတ် ရင်ခွင်သစ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ‘ရေစီးကြောင်းထဲမှ လူများ’ ဝတ္ထုတိုမှာ ‘တာရာမင်းဝေ’ ဆိုတဲ့ ကလောင် အမည်ကို စတင် အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၅ မှာ တာရာမင်းဝေ ကလောင် အမည်နဲ့ ‘ပန်းခေတ်က လမင်း’ ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး လုံးချင်း ဝတ္ထု ထွက်ပြီး ချိန်မှာတော့ လူငယ် စာဖတ် ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၆ – ၉၇ ထုတ် သရဖူ မဂ္ဂဇင်း တွေမှာ မောင်ယော ကလောင် အမည်နဲ့ လည်းကောင်း၊ စုဖွဲ့ ကလောင် စန်တီယာဂိုနဲ့ ကလောင် အမည်နဲ့ လည်းကောင်း စာပေ ဝေဖန်ရေးတွေ၊ စာပေ သဘော တရား သီဝရီတွေ ရေးသားခဲ့တယ်။ မောင်ဓား၊ ဦးဦးအံဘွယ် စတဲ့ ကလောင် အမည်တွေ နဲ့လည်း ရေးသားခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်း လုံးချင်း ဝတ္ထု (၄၂) အုပ် ရေးသားခဲ့ပြီး၊ ဝတ္ထုတိုတွေ ကဗျာတွေလဲ ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ ဟန်သစ် မဂ္ဂဇင်းပါ “အားလူး စားသူများ” ဝတ္ထုတိုနဲ့ ဖြူးမိတ်ဆွေများ စာပေဆုကို ရရှိခဲ့တယ်။
စာပေ အပြင် ပန်းချီ ဆွဲခြင်း၊ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို ဇာတ်ညွှန်း တွေနဲ့ သီချင်းတွေလဲ ရေးသားခဲ့သည်။
ပထမဆုံး ဗီဒီယို ဇာတ်ညွှန်း ကတော့ “ရွှေရောင် ဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောက် ကြက်ခြေခတ်နဲ့ ကောင်မလေး” ဖြစ်ပါတယ်။ တာရာမင်းဝေရဲ့ ဝတ္ထု အချို့ကို ဗီဒီယို ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး ခဲ့ရာမှာ၊ အဲဒီ အထဲက မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ရိုက်ကူးကာ ဒွေး၊ နန္ဒာလှိုင်တို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ကောင်းကင်အကြွေ ကောက်တဲ့လက်”၊ ဒါရိုက်တာ လွင်မင်း ရိုက်ကူးကာ နေတိုး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ သရုပ် ဆောင်ထားတဲ့ “တစ်ကိုယ်တော်ရေးတဲ့ ကကြီး ခခွေး”တို့ဟာ ထင်ရှားတယ်။ ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ (ဇာဂနာ) ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “မြင်းစီးထွက်သော အိပ်မက်များ” ရုပ်ရှင် ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ ပြသခွင့် မခဲ့ပါဘူး။
၁၄ – ၂ – ၉၈ မှာ မခင်မေဝင်း (စာရေး ဆရာမ မနော်ဟရီ) နဲ့ လက်ထက် ခဲ့ပြီး၊ သား တစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့တယ်။
“လူနံပါတ် (၁၃)” ဝတ္ထုတို စုစည်းမှုနဲ့ “နက္ခတ် ရစ်သမ်” ကဗျာ စာအုပ် တအုပ် ရေးသား ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်နေဆဲ၊ ၂ဝဝ၇ ခု၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄ဝ မှ မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန်၊ ကွန်လွယ်ချိန်မှာ ဇနီး ဖြစ်သူ စာရေး ဆရာမ မနော်ဟရီနဲ့ သားဖြစ်သူ ခေတ်နေ (ခ) ကြယ်စင်မင်းဝေတို့ ကျန်ရစ် ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းကင်အကြွေ ကောက်တဲ့လက် (ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၆)
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက် (ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝဝ၇)
ကိုယ့်လက်နဲ့ ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း (အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၂)
ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သည့် မြေစိုင်မြေခဲများ အကြောင်း (စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၅)
ကျွန်တော်နှင့် ဆောင်းရာသီ ဒဿန (ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၇)
ကျွန်တော်နှင့် ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံ
ကျွန်တော်မှ အပြန် (သြဂုတ် ၂ဝဝ၆)
ငါသည်သာ ပန်းဖြစ်၍ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပွင့်ခွင့် ရခဲ့သော် (ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၆) ဒုတိယအကြိမ်
နတ်ပျိုမအတွက် ပန်း (ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝဝ)
ပန်းလက်ဖဝါးမှာ ပါးအပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ကောင်မလေး
ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ ခွာသံ (ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၅) ဒုတိယ အကြိမ်
ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာ ဝှက်ထားတဲ့ပုံပြင် (ဇွန် ၂ဝဝ၆)
မိုးခေါင်လို့ တီးတဲ့ဗုံသံ (ဇူလိုင် ၂ဝဝ၄)
မြင်းစီးထွက်သော အိပ်မက်များ (နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၆)
ရွှေဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောင် ကြက်ခြေခတ်နဲ့ ကောင်မလေး (ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၆) တတိယ အကြိမ်
ဝင်္ကပါကို ဖွင့်တဲ့သော့ (စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၆)
သူ့အိုးပုတ်ကလေးကို ကျွန်တော် ပြန်မပေးပါ (ဇူလိုင် ၂ဝဝ၇)
သင်နှင့် နံနက်ခင်းကိုသာ ဝင်ခွင့်ပြုမည် (ဇွန် ၂ဝဝရ) တတိယ အကြိမ်
အလံမထူခဲ့သော လက်များ (မေ ၂ဝဝ၇)
အာလာဒင်မသိလိုက်တဲ့ မီးခွက် (ဇူလိုင် ၂ဝဝ၆)
၁၉၉၅ စက်တင်ဘာ ဟန်သစ်
တာရာမင်းဝေ၏ ချစ်သူသို့ ကဗျာများ
သူတို့ရဲ့ ယန္တရားသော့ချိတ် နဲ့
မနက်ဖြန်ခါကိုတော့ နေထွက်ခွင့်ပေးရမယ်လေ။ ။
သုံးဆယ်ကျော်တာတောင် မလိမ္မာ ဘူး
နီကိုရဲ ထွန်းဝေမြင့် …စသဖြင့်ပြန်သွားကြပြီ
ကိုယ့်ကို ကိုယ်တစ်ခန်းလုံး မီးဖွင့်ပြီး
ကပိုကရို ဖွင့် လိုက်တယ်…
ညီမလေးရယ်.. စိတ်ထဲမှာ စာမေးပွဲကျတယ်..
လောကဓံ ဆိုတာ ကိုယ်ခံစားမှ ဖြစ်တဲ့အရာပါ…
လမ်းထိပ်ကခွေးကြီးထက် နည်းနည်းပဲ ပိုပါတယ်။
မကြာခင်(၆)နာရီ နေဝန်းဆိုက်ရောက်တော့မှာပါတဲ့ ။
လမ်းတို့ရဲ့ အလျားကိုလည်း..ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့။ ။
ဆရာမ မနော်ဟရီ၏ဘလော့ဂ်ထဲမှ ကျွန်မချစ်သောကဗျာများ စာမျက်နှာမှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘ၀မှာ ကြယ်တွေ ကြွေကျခဲ့သတဲ့
နေတွေ လတွေတောင် ကြွေကျခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျောက်စရစ်ခဲတွေ အပြိုင်းအရိုင်း လွင့်ကြဲနေတယ်။
ပြက္ခဒိန်မှာတော့ နက်ဖြန်ခါဟာ နာမည်ဆိုး မရှိပါဘူး။
နှင်းဆီချွေ ရထားမှာ စူးစူးဝါးဝါး ဥသြဆွဲပစ်လိုက်တယ်။
ဘယ်လိုမှ နိဂုံး ချုပ်မရပါဘူး
ဘီလူးဖမ်းသလို ကြမ်းတဲ့ လင်္ကာ
ဒိုင်ယာရီ၏ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာ ထက်၌”
မင်နီတွေနဲ့ ရဲ လို့ပေါ့ကွယ်။
မောင်းကွဲသံ ခပ်လေးလေး တစ်ချက်ပါပဲ။
သဲကန္တာရ တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ပြိုလဲကျတယ်။
ပြီးတော့ ဒိုင်ယာရီချို ခါးတစ်ခွက်
မိုးတွေကို တိုးတိုးကလေး ရွာရဦးမှာပေါ့လေ
ပန်းရနံ့တွေကလည်း ခပ်မြင့်မြင့်ကနေ ပျံသန်း
သီချင်းမဆိုတော့ဘဲ ဟိုးအဝေးကို ငေးခဲ့ရတယ်။
ဘာကြောင်းမှမရှိပါဘူး သူငယ်ချင်း….။ ။
အိပ်မက် မြင်းခွာ အမှတ်(၁၃)
ဘယ်သူမှ လူမိုက် မမည်။
ငါဘယ်တော့မှ မသွားဘူး မိန်းကလေးရေ။
နင်ရဲ့စိတ်ကို တံခါးလှမ်လှမ်းခေါက်မိတယ်. .
အခုထိမြူပြာတွေထဲမှာ ပွင့်နေတုန်း. . .
မထူးတော့ပါဘူး . . .
သူငယ်ချင်းဆိုတာ . . . ဆွတ်ခူးဖို့မှမဟုတ်ဘဲ……..။
ငါတို့ ဆက် ချစ် နေကြဦးမယ်
အိုးကြီးကို တည့်တည့် ၀င်တိုက်တယ်။
အိုကြီးလည်း ဗိုက်ပွင့် ကွဲကြေ
လင်းတစက်စက် စီးဖြိုင် ညွှတ်ကျ။
ပါးစပ်ကြီးတွေ ပြဲလန်အောင် ဟလို့ပေါ့။
ဟိုးအရှေ့မှာ မိုးတွေ ရွာပြီ။
လူဟာ ကိုယ့်ဖာသာ လျှောက်ရဲရမယ်ကွယ့်။
ဂျိုးဂျိုး ဂျိမ့်ဂျိမ့် လှပ
လူဖြစ်အောင် ငါအသက်သွင်းဖူးတယ် ၊၊
စီးကရက်သောက်ရင်း သူ ချောင်းဆိုးဖူးတယ် ၊၊
`ကြယ်ကို ကြယ်နဲ့ ရံမတဲ့ `
အားလုံးကို သူ အပိုင်ရတယ် ၊၊
လ ကို ခိုစီး
သူ့ရဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်ပေးပါ ၊၊
ပဆစ်အိမ် ဝင်္ကပါပျက် နက္ခတ်ပျံရာည
မေမေ့ … ကိုကျွန်တော်သတိရလိုက်တာ … ‎
လရောင်ကိုတောင်ပံနဲ့တဖျန်းဖျန်းရိုက်ကြတယ် … ။
လောကအတုမှာ … လူသားအတုတစ်ယောက်
မေမေ … ‎
အခု … ဘယ်မှာလဲ
ဘယ်မှာလဲ … .. ။
မေမေ … ။
ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှ … ‎
မေမေဟာ … ‎
သူ့ကိုယ်သူဖြန့်ခင်းပြီးကျွန်တော့်ကိုလျှောက်နင်းခိုင်းခဲ့တယ် … ။
အို … ခတ္တာရေ … ‎
ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်ပုခက်ဖြစ်ပြခဲ့တယ် … ။
လူက … လှေကားခြေရင်းမှာကျန်ခဲ့ရတယ်
‎“မေမေ့”ကိုလုသွားတယ် … ။
တရှူးထိုးဆင်းချတယ် … .။‎
ဒါပေမယ့်မေမေရယ် … ။
ဆက်ထုံးရှည်လျားလျားနဲ့ရှိခဲ့တယ် …. ။
မေမေ့အကြောင်းကိုလည်းခုထိစာလုံးမပေါင်းနိုင်ခဲ့ဘူး … ။
ဘာသာဗေဒမတူ၊ ဖတ်တဲ့စာချင်းမတူ၊ ခူးတဲ့ပန်းချင်းမတူ
မိတ်ဆွေနဲ့မတူတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ် … ။
လွှမ်းရုံဖန်ဆင်းထားသူဖြစ်တယ် … ။
သူများမေမေတွေထက် … နို့ရည်ပိုမထွက်ပါဘူး … … .‎
ဒါပေမယ့်မျက်ရည်တော့ပိုထွက်ရင်ထွက်မယ် … .‎
ဖုန်မှုန့်ပျံ့စင် … ‎
အခု … လင်းနို့တွေအောင်းနေပြီမေမေ …။
မေမေ့လက်ခုပ်သံတလွင်လွင်ပေါ့ … ။
ဂျစ်ကားတွေတက်နင်း၊ ရထား တစ်စင်းလုံးဆောင့်ကန်
ကျွန်တော့်ရှေ့မှောက်မှာကြောက်ရွံ့စွာလက်ပိုက်ရပ်ကြတယ် … ။
ကျွန်တော်ကလည်းအိပ်ပုပ်ကြီးတယ် … ‎
ကျွန်တော်အိပ်တိုင်းမေမေ့ဗျိုင်းကလည်းရှေ့မှာပျံတယ် … ။
မေမေ့လည်တိုင်ကိုဖက်လို့ပေါ့ … ။
အင်္ကျီမှာကြယ်သီးတစ်လုံးလိုနေပြီ …. မေမေ … ။
ရန်သူတွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာဓါးချင်းခုတ်ဖူးတယ် …. ။
မေမေဟာခံတပ်ဆန်သူတစ်ယောက်ပါပဲ … ‎
ကျွန်တော့်ဘက်မှာရပ်တည်၊ ကာကွယ်၊ တိုက်ခိုက်
သူမကိုတော့ … မြားအစင်းစင်းစိုက်ခဲ့တယ် … ။
ကျွန်တော့်ကိုအလိုလိုက် … ကျွန်တော့်ကိုမရိုက်
ကျွန်တော့်ကိုရိုက်လည်းကျွန်တော်မငို … မေမေပဲငို … ။
ဆေးမျက်လုံးနဲ့ကြည့် … တဲ့။
လေကိုလေနဲ့မှုတ်တာကမှလွဲဦးမယ် … ‎
ပညာလှလှတတ်စေချင်တာ … အသေအချာပေါ့ …။
အဆင့်တွေက ၁ မှ ၁၀၀ မရေရာ … ။
တစ်စတစ်စ … ‎
လူငယ်သီချင်း၊ နှင်းဆီဓားသွား၊ ရင်ကြားစိုက်နစ်
ကျွန်တော်ဟာ တေလေကုန်းမှာ ကဗျာဆရာဖြစ်လာတယ် … ။
ဂမ္ဘီရလမင်းကလည်းဝိုက်အုပ်ဖြာဆင်းကျနေတော့တယ် … ။
မြူပြာမှိုင်းမှုန်၊ အိပ်မက်ကိုစောင်လိုခြုံဆဲ … ‎
ကျွန်တော့်အပေါ်ကြိုးပြတ်ကျတယ် … ။
နှင်းတွေပြောင်းပြန်စီးမျောလာ … ။
အလင်းရဲ့နတ်သမီးလို … မီးအိမ်ကိုင်ပြီးစောင့်နေတယ် … ။
အမေကား … သားကိုယ်စား မျက်ရည်မဲ့စွာငို … ။
သား … ‎
ဘဝဆိုတာရေစီးထဲကဗေဒါ … မရေရာဘူးကွဲ့
ဒါပေမယ့် … ‎
မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ အရုပ်များ၊ အရောင်များ၊ အရိပ်များ
ဝိညာဉ်ရုန်းကန် တစ်နေ့မှာသူတို့ပြန်ရှင်သန်လိမ့်မယ် … ။
တစ်စက်ချင်း … တစ်စက်ချင်း … တစ်စက်ချင်း … ချိုစေခဲ့ … ။
မီးကိုလည်းကျွန်တော်နမ်းခဲ့ … ရေကိုလည်းကျွန်တော်နမ်းခဲ့ …။
ကျွန်တော် … .လမ်းမှာဝတ်ရန် … ။
သွားကြစို့လေ … ‎
ပဒိုင်းပန်းတွေလည်းဗောင်းလန်အောင်ခါရမ်းပွင့်ဝေ … ။
ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်နေတယ် … (ဖိနပ်လည်းအခါခါပေါက်ခဲ့)‎
ဝင်္ကပါတောင်ကြားမှာ … ကံနတ်ဘုရားနဲ့စီးချင်းထိုး
ကျွန်တော်ကြိုးစား၊ အမှားများလည်းချင်းချင်းနီ … ။
ဖယောင်းတိုင်ဖြူဖြူဟာမေမေ၊ နံနက်ခင်းကြေးရုပ်ဟာမေမေ … ။
ခု … မေမေဆုံးပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာ
ကျွန်တော်ဟာအရာရာဝင်းရှင်းပေါက်ကွဲ … နီလဲ့..‎
လူတဆုံး … ဝိညာဉ်တဆုံး၊ အကြွင်းမဲ့ဗုန်းဗုန်းလဲကျ
မေမေဟာ … နာရီသံနဲ့အိပ်၊ နာရီသံနဲ့နိုး …‎
မီးလောင်နေတဲ့ငရဲပင်ပျိုမှာ၊ ပွင့်အိုလေးပမာ၊ ဝါဝါနွဲ့နွဲ့
ဆိုလိုရင်းကိုချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့တတ်တယ် … ။
လူကန္တာရတို့ရဲ့ကျောက်တိုင်၊မြေခိုးမြေငွေ့ကိုပိုင်တယ် … ။
‎(အလင်းပြာမှတ်ကျောက်အတွက် မင်တစ်ပေါက်ဖြစ်တယ် …)‎
အရိုးမြုပ်အောင်ကိုက်မြိုခဲ့ရပြီ … ။
ဘာမှလည်းလုပ်မပေးနိုင်တဲ့နေရာ … အဝေးမှာ … ‎
ကျွန်တော်က … ဟိုး … အဝေးကြီးမှာ … ။
ဒရွတ်တိုက်ပျံတက်ဆဲ … ။
အမေမရှိချိန်မို့လမ်းပေါ်မှာပြန့်လို့ကျဲလို့ … ။
အမှားလက္ခဏာ၊ အမှန်လက္ခဏာ၊ ဘာနဲ့မှလာမတိုင်းတာနဲ့
ချစ်သောမေမေ … ကောင်းရာဘုံသို့ရောက်ပါစေ … ။
နောင် … နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရင်
အဲဒီလူဟာ … သားပဲပေါ့မေမေ … ‎
ဘယ်သံသရာမှာပြန်ရှာရင် မေမေ့ကိုတွေ့နိုင်မလဲ … ‎
ကျွန်တော့်ရှေ့မှောက် လရောင်တွေကွေ့ကောက်လွန်းလှချည့် … ။
အမေ့ကိုယ်စား … ‎
အမေ့ကိုယ်ပွား … ‎
‎“လင်း”ပြီးမှပျောက်မယ် … ။
ကျွန်တော် … ‎
မေမေ … .‎
မာယာတောင်ခြေမှ ဒရမ်တီးသူများ၊ မျက်လှည့်တီးလုံးများ
သီချင်းအကွဲအစ … တစ်ပုဒ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ … ။
ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ … ‎
ခေါင်းလောင်းထိုးသံတိုးတိတ်လွင့်ဝေ … … ..‎
‎ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .‎
‎ … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..‎
‎ … … … … … … … … … … … … … … … . ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ .. ..။ ။
ဗျတ်စောင်း ဘာသာဗေဒ ‎
မင်းရဲ့ အဖြူ တစ်ဝက်ရဲ့ အဖြူတစ်ဝက်လောက်
(မိုးခေါင်လို့ တီးတဲ့ဗုံသံ … မှ)
စာရွက်ပေါ်မှာပဲ နင့်ကို ချစ်ရုံနဲ့တော့
ငါ့ဘ၀ မင်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်လိမ့်မယ်မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်လို့ပြောတိုင်း
ပြီးမှ ငါ့ကိုစာပြန်ပါ ။
အိုမင်းသော်လည်း စိမ်းညို့သော သစ်ပင်ကြီး တပင် အောက်မှာ တွေ့ရှိခဲ့ကြစဉ်က ဖြစ်သည်၊ ဘုန်းတော်ကြီးက `ဂမ္မာ´ကို ဆုံးမစကားဆို၏။
`မင်း.. ဟိုနေ့က မူးပြီးရမ်းတယ်ဆို´
`ဟို .. တခါတလေပါ .. ပေါက်ကွဲသွားလို့ပါ´
`မူးတာလည်း မကောင်းဘူး၊ ရမ်းတာလည်းမကောင်းဘူး´
`တင့်ပါ့ဘုရား တပည့်တော် ဆင်ခြင်ပါ့မယ်။ ဒီလိုသတင်းမျိုး နောက်ထပ်မကြားစေရတော့ပါဘူး´
ဘုန်းတော်ကြီးက တည်ကြည်စွာ ခေါင်းငြိမ့်ပြ၏။
`အေး.. ဆင်ခြင်မှ ဖြစ်မယ်။ သတင်းဆိုတာ အင်မတန်ပြန်လွယ်တယ်´
`အဲဒီသတင်းကို ကြားရတဲ့လူတယောက်က ၅မိနစ်အတွင်း နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောတယ်ဆိုပါစို့၊ အဲဒီနှစ်ယောက် အဲဒီနှစ်ယောက်ကလည်း အဲဒီလိုဘဲ နောက်ထပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုပါစို့၊ အဲဒီသတင်းကို တနာရီအတွင်းမှာ လူရှစ်ထောင်ကျော် သိသွားနိုင်တယ်`
ဘုန်းတော်ကြီးက မြေပြင်ပေါ်မှာ တုတ်နဲ့ရေးခြစ်ပြကာ သူ၏ သတင်းသင်္ချာကို တွက်ချက်ရှင်းလင်းပြ၏။
အစ ၁ ကိုယ့်လုပ်ရပ်(သိ)
၅မိနစ် ၁x၂=၂ ၁+၂=၃
၁၀ မိနစ် ၂x၂=၄ ၃+၄=၇
၁၅ မိနစ် ၄x၂=၈ ၇+၈=၁၅
၂၀ မိနစ် ၈x၂=၁၆ ၁၅+၁၆=၃၁
၂၅ မိနစ် ၁၆x၂=၃၂ ၃၁+၃၂=၆၃
၃၀ မိနစ် ၃၂x၂=၆၄ ၆၃+၆၄=၁၂၇
၃၅ မိနစ် ၆၄x၂=၁၂၈ ၁၂၇+၁၂၈=၂၅၅
၄၀ မိနစ် ၁၂၈x၂=၂၅၆ ၂၅၅+၂၅၆=၅၁၁
၄၅ မိနစ် ၂၅၆x၂=၅၁၂ ၅၁၁+၅၁၂=၁၀၂၃
၅၀ မိနစ် ၅၁၂x၂= ၁၀၂၄ ၁၀၂၃+၁၀၂၄=၂၀၄၇
၅၅ မိနစ် ၁၀၂၄x၂=၂၀၄၈ ၂၀၄၇+၂၀၄၈=၄၀၉၅
၆၀ မိနစ် ၂၀၄၈x၂=၄၀၉၆ ၄၀၉၅+၄၀၉၆=၈၁၉၁
လူဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေရကြောင်း ဂမ္မာသိပါသည်။ သို့သော်လည်း သတင်းတို့၏ ပျံ့အားသည် သည်မျှ ပြေးလွှားသွားနိုင်ကြောင်းကိုတော့ မတွေးမိခဲ့။
လန့်သွားသည်နှင့်အမျှ ရှက်သလို ခံစားလိုက်ရသည်မှာလည်း သေချာသည်။ ထို့ကြောင့် လေးနက်စွာ…
`တင့်ပါ့၊ နောင် မဖြစ်စေရတော့ပါဘူးဘုရား´
နောက်ပိုင်း ရက်များတွင် ဂမ္မာသည် မကောင်းမှုများမလုပ်မိရန် ထိန်းသိမ်းဆင်ခြင်ခဲ့၏။ မတော်တဆမျှပင် မဖြစ်စေခဲ့ရ။ သို့တွင်မကသေး၊ ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပင် သူလုပ်ခဲ့လေ၏။ ထိုကောင်းမှုကို (X) ဟု ဆိုကြပါစို့။
သူ့ကောင်းမှုအကြောင်းကို ဂမ္မာသည် မည်သူ့ကိုမျှမပြောပြချေ။ သူက ကောင်းတာလုပ်လုပ် ဆိုးတာလုပ်လုပ် သူ့အကြောင်းကို လူမသိစေချင်သူဖြစ်၏။ သူနှင့် သူ့ကောင်းမှု (X) အကြောင်းကို လူတွေ ပြောနေကြဦးမည်။
မြို့ထဲထွက်ခဲ့၏။ လူအချို့၏ စကားဝိုင်းတစ်ခုကို ကြုံသည်။ ထိုသူများသည် ကောင်းမှု (Y,Z) တို့အကြောင်း ပြောနေကြခြင်းဖြစ်၏။ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် သူ၏ကောင်းမှု (X) အကြောင်းကိုပါ ပြောလာမည်စိုးသဖြင့် ထထွက်လာခဲ့၏။
နောက်စကားဝိုင်းတခုမှာတော့ ကောင်းမှု (V,W) များအကြောင်းကို ပြောနေကြသည်။ ဤစကားဝိုင်းတွင်တော့ ထထွက်၍လည်းမရသဖြင့် အနေကြပ်ငြီးစီနေခဲ့သည်။
စကားဝိုင်းသည် ကောင်းမှု (X) ဆီ ရောက်သွား၏။ အသေးစိတ်လည်းပြောကြသည်။ အကျယ်တ၀င့်လည်း ပြောကြသည်။ သို့သော် သူ့အကြောင့်တော့မပါချေ။ ထူးဆန်းနေသည်က ထို ကောင်းမှု (X) ကို ပြုလုပ်သူသည် သူဖြစ်ကြောင်း သိပုံပင်မရ။
`အဲဒါ ကျွန်တော် လုပ်ထားတာဘဲ´
အားလုံး၏ မျက်လုံးများက သူ့မျက်နှာပေါ် စိုက်ကျလာကြသည်။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလည်း ဆက်ပြောချင်စိတ်မရှိပါ။ သူ့ဘာသာ စာတအုပ် ထုတ်ဖတ်နေလိုက်၏။
အိမ်ပြန်ရောက်မှ သတင်းသင်္ချာကို အမှတ်ရပြီး ပြုံးမိပြန်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးနှင့်တွေ့လျှင် ပြောပြရဦးမည်။
သို့သော် တွေ့လျှင်တွေ့ချင်း ဘုန်းတော်ကြီးကပင် သူ့ကို ဆူပူဆုံးမပြန်လေသည်။
`ဟို တခါကတည်းက မင်းကို ငါပြောပြီးပြီ။ လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ သတင်းဆိုတာ တံလျပ်တွေလို တဖျတ်ဖျတ် ပွားထွက်နေတာ။ အစစ အရာရာ ဆင်ခြင်ပါလို့´
`ဘာဖြစ်လို့လဲ .. ဘုရား´
`မင်းက ကောင်းမှု (X) ကို မင်းလုပ်တာပါဆိုပြီး ကိုယ်ရည်လိုက်သွေးနေတယ်ဆို၊ လျှောက်ကြွားနေတယ်ဆို ….. မဏ္ဍာပ်တိုင်ပေါ်မှာ လျှာကို အလံထူနေတယ်ဆို´
`ဗျာ .. တပည့်တော်´
`မင်းကို သေသေချာချာ ငါရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ၊ သတင်းဆိုတာ သင်္ချာအချိုးအစားနဲ့ ပြန့်ပါတယ်လို့´
ဘုန်းတော်ကြီးက မြေပြင်ပေါ်တုတ်နှင့် ခြစ်ကာ သတင်းသင်္ချာကို ထပ်တွက်ပြရန်ပြင်၏။ ဂမ္မာ့စိတ်ထဲတွင် တွေဝေရှုပ်ထွေးလျက်ရှိလေသည်၊
ထပ်ချပ်.. ငါ.. လိုက်ပါမည် ။
ငါ့ကို… ထူပါ ။
လက်သည်းတွေတောင် ခွေခေါက်နေပြီ ။
သူ… ဘာတွေ တွေးပြီနည်း ။
အခြားဘာကို တွေ့စွမ်းမလဲကွယ် ။
သံသရာရထားကို စောင့်နေသည် ။
ခြင်္သေ့တို့ပင် အိပ်ဝံ့ပါသလား ။
သူတော်စင်တို့ ပျော်ပိုက်ခဲ့ကြပြီ ။
တွင်းထဲမှာ နှင်းခဲတွေပုပ်သိုးနေရော့သလား ။
ဟော… နှင်းတွေ တစ်ဆုပ်ပြီးတစ်ဆုပ် ။
မာယာတွေနဲ့ မှုံရီအုံချနေတယ် ။
ငါ တွေ့ခဲ့ဖူးပြီ ။
ငါ တွေ့ဖူးပြီ ။
ပျော်စရာမှ မဟုတ်ပဲကွယ် ။
ငါ… မမွေ့ပျော်တော့ပါပြီ အရှင်..။
ငါသည်… တစ်ခါက ဖယောင်းတိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏
မီးတောက်ကို ချစ်လေသည် ။
မြေ၏အနက်မှာပင်ေ၀၀ါးဆဲ ။
ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်းပွားလျက် ။
ထိုသော… မနေ့က ငါသည်
တောင်စွယ်တန်းမှာ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီ ။
ဤယနေ့… ငါ… သည်
အားလုံးကို လွှတ်ချခဲ့ချင်ပါပြီ ။
ငါ့အလုပ်ကို ငါလုပ်ရပေတော့မည် ။
ဘုရားရှိခိုးရင်း ရှက်လေသည် ။
အမှားလက္ခဏာ ပါလေသည် ။
လမ်းလျှောက်နေသော သင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်များဖြစ်၏ ။
မှီတွယ်ရာလည်း မဲ့တတ်သည် ။
အို… “လူသားအားလုံး ချမ်းမြေ့ပါစေသား´´
ငါသည်လည်း ပါဝင်ချမ်းမြေ့ပါစေသား ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ။
သွားကြားထိုးတံ စူးကြလေသည် ။
နောက်လူအတွက် ဖြစ်ပါစေကွယ် ။
ဆင်ကိုနှာမောင်း မဖြုတ်ကြပါနှင့် ။
နေပူလမ်းမှာ တွဲခေါ်ကြပါ ။
ညောင်းညာလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ ။
ပထမ သီအိုရီပဲဖြစ်သည် ။
ငါ့အခေါင်းကို ငါပဲဖုံးသွားချင်တော့၏ ။
တဖွားဖွား ခြွေချပစ်ရမည် ။
လက်ချောင်းတွေအချင်းချင်း ပြန်ဖမ်းချုပ်ကြခြင်းဖြစ်၏ ။
သူရဲကောင်းဟု မခေါ်ချင် ။
ယခု ဘယ်ဆီချိတ်မည်နည်း ။
လမ်းဘေးမှာ မြက်ဖြင့်ဆောက်မည် ။
ရေစင်အေးဖြင့် ငါ.. ကန်တော့ပါအံ့
မေတ္တာဖြူဖြင့် လင်းလိုလှပါတော့သည် ငါ့အရှင်…။
ပို၍… နိမ့်ဝင်သွားတတ်၏ ။)
မိုးခါးရနံ့ သင်းပျံ့နေတတ်၏ ။
ငါ့ကို တွန်း၍ကျော်သွား၏ ။
ငြိမ်းချမ်းသည်ထက် ငြိမ်းချမ်းပါစေ ။
အသရေတိုးသည်ထက် တိုးပါစေ ။
မြင့်သည်ထက် မြင့်ပါစေ ။
ဟားတိုက် ရယ်မောနေကြသည် ။
အခွံခွာ၍ စားလိမ့်မည် ။
မျက်လှည့်ဆရာတွေ ကြွေအံခေါက်နေသည် ။
တစ်လောကလုံး အနက်ရောင်လွှမ်းတော့၏ ။
ထာဝရ ငါ… ထားခဲ့ချင်ပါပြီလေ ။
တစ်နေရာတွင် ဖိနပ်စီးရသော ငါတို့သည်
တစ်နေရာတွင် ဖိနပ်ချွတ်ရဦးတော့မည် ။
ငါ… ယုံရတော့မည်လော ။
နီး… နီး… နီး၍လာခဲ့ပြီ ။
မြေမှထသော ငါ့ကိုမြင်ပါ ။
စပါးဖြစ်အောင် စိုက်ကြပါသလား ။
ငါတို့ နေသွားရမည် ။
လှံသွားတို့ကိုပင် ခွေညွှတ်စေတော့၏ ။
တိုးကာ ကျယ်ကာ ငါ .. ကြားနေရ၏ ။
ဘာမှမပြောဘဲ ထားသွား၏ ။
လမ်းပြစေစားတော်မူပါလော့ .. မြတ်သော ငါ့ … အရှင် ။ ။
(ဗုဒ္ဓ … သို့)
10 comments on “တာရာမင်းဝေ”
zaw min htay on June 6, 2015 at 3:24 am said:
ကျနော်အကြိုက်ဆုံးဆရာပါ။ ပြန်လာခွင့်သာရှိရင် ဆရာကို မျှော်နေမိမှာပါ
ဟိန်းထက်ကျော် on March 29, 2013 at 11:26 am said:
သူက”လူတစ်ပတ်နွမ်း”မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့နေတဲ့”လူ.အသစ်”။မြေဆွဲအားနဲ့ရပ်တည်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။”ကောင်းကင်ဆွဲအားနဲ့ရပ်တည်တဲ့လူ”။ (တာရာမင်းဝေဧ။်”သင်နှင်.နံနက်ခင်းကိုသာဝင်ခွင်.ပြုမည်”…မှ) သူသေသော်လည်းသူ့စာအုပ်များသည်ပရိသတ်ရင်ထဲထာဝရရှင်သန်မည်ထင်သည်။
Anonymous on March 18, 2013 at 4:48 pm said:
ကျောာ်မင်းထွန်း on November 7, 2012 at 4:37 pm said:
ဆရာ တာရတာမင်းဝေ ရဲ့ စာအုပ်တွေကို
hla myo aung on May 12, 2012 at 9:44 am said:
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့အကြောင်တွေကို သိရလို့
ကျောက်တုံး on February 18, 2012 at 10:31 am said:
kyawmintun on February 17, 2012 at 10:13 am said:
အင်း ခုလိုဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
လင်းသီဟ(ယော) on February 5, 2012 at 1:22 pm said:
အငွေ့ on December 31, 2009 at 12:17 pm said:
ဆရာ ဈပန ခရီးအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးထားတာလေး ပြန်ပြီး ဖော်ပြတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်း ဥက္ကာရေ ကျေးဇူးပါကွာ..။
မောနွေ on November 21, 2009 at 1:09 pm said:
ကိုဥက္ကာရေ ကျွန်တော် လာ သွားတယ် ဗျ ။
နောက်မှတွေ့ မယ် နော် ။